I-Zirconia evelele kakhulu ye-Ceramic Shaft China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-Zirconia I-Ceramic Components > I-Zirconia I-Ceramic Component > I-Zirconia evelele kakhulu ye-Ceramic Shaft
I-Model No.: JH.CS.001
I-Zirconia shaft ceramic inomsebenzi omkhulu wokumelana nokushisa okuphezulu, ukumelana nokubandayo okubandayo, ukumelana nokuqeda amandla, ukumelana nokushisa ukushisa, ukumelana nokushisa kwamandla kagesi, ukuzigcoba ngaphandle kwamafutha, izici zokujikeleza okusheshayo. Isixazululo esingenakulinganiswa sokusebenza ngaphansi kwemvelo enzima kakhulu yokusebenza kanye nezimo ezikhethekile kunezinsimbi zombili nezinsimbi zepulasitiki.
Sinikeza izinto ezihlukahlukene zokuzikhethela , kuhlanganise i-zirconia oxide, i-aluminium oxide, i-Silicon oxide, i-silicon nitride. I-DIfferent impahla ikwazi ukuhlangabezana nesicelo sakho esikhethekile, izidingo ezikhethekile.
Kukhona ukuhlukahluka kwe-shaft enhle ye-ceramic esingayinikeza, njengejubane elikhulu lokujikeleza, ukushayela kwe-corrosion shaft, shaft anti-electromagnetic, shaft kagesi yokufaka umshini wokushisa, kanye ne-vacuum environment shaft.
Esikhathini esivamile, ukufakela okunamandla kakhulu nokucacile kuyadingeka phakathi kwe-shaft ye-ceramic ne-camamic bushing, shaft ye-ceramic neminye imihlangano ehlobene nayo, noma okunye okukodwa okudingekayo ukuze kuhlangabezane nemfuneko yomhlangano, khona-ke sizogaya ubuso wangaphakathi nangaphandle, ukuphola, ukugcoba futhi ugcobe ubuso bokuba ukucaciswa kokugcina ngokulinganisa okuphakeme kakhulu.
Ngenxa ye-shaft ephakeme ye-ceramic enezici eziphakeme kakhulu, inesicelo esikhulu kakhulu, njengezinsimbi zezokwelapha, ubunjiniyela be-cryogenic, izinsimbi zokukhanya, amathuluzi omshini ophakeme, ama-speed speed, imishini yokunyathelisa, imishini yokucubungula ukudla.
Imikhiqizo yekhwalithi iphuma ebucikweni bombuso wezinqubo zokukhiqiza, futhi idinga ithuluzi lokuhlola eliphambili. Imishini yokuhlola eyinhloko ihlanganisa i- CMM, iphrojekitha njll.